တခုလပ်​မမ – Grab Love Story
ကျတော် တို့ရဲ့ ဆင်ခြေဖုန်ရပ်ကွက်လေးသည် ..အိမ်ခြေလေး တွေ ကျပ်ညပ်နေပီးဘေးအိမ်များနဲ့ ကပ်လျက်တည်ရှိပါတယ်.ကျတော် ကျောင်းပီးခါစ..က အလုပ်မရှိအိမ်မှာ လိုလို ပဲ အလေလိုက်နေခဲ့.ရတယ်ဗျာ.. တခုပြောပါရစေကျတော်တို့ ခေါင်းရင်းဘက်ဘေး အိမ်မှာ ကျတော်ထက် အသက် ၈နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ မမကြီးတယောက်ရှိတယ် ..သူမှာ ယျောက်ကျားနဲ့ ခလေးနှယောက်ရှိတယ်ကလေးနှယောက်အမေသာပြောတာ.အသားကဖြူဖြူ. ဖင်လုံးကြီးတွေကလဲ အယ်နေတာပဲ..နဲနဲ ဝဝ နဲ့ နို့ကြီးတွေကလဲ ပြူးနေတာပဲ ဗျာ.. တရက် ကျတော့် မိဘတွေ ဥပုတ်စောင့်သွား ကျတယ် .သူတို့အိမ်ကလဲ သူမိဘတွေ ပါ ဥပုတ်တရားသွားနာကျတယ် .ကျတော်လဲ တယောက်ထဲ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး.အခွေထိုင်ကြည့် ခန နေတော့ ထမင်းစညးဖို့နောက်ဖေးအဝင် အသံသဲ့သဲ့ကြားတာကြောင့်အခန်းထဲ ဝင်ပီး ချောင်းနေကျအပေါက်ကလေးကနေချောင်းလိုက်တယ်.
အဲ့အပေါက်ကနေချောင်းရင် သူတို့နောက်ဖေးအိပ်တဲ့နေရာနဲ့ တန်းနေတာပဲ ခုန်ပေါ်အသာလေးတက်ပီးချောင်းလိုက်တော့ မျက်လုံးထဲက မြငိကွင်းကြောင့် အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှား မိတယ် အဲ့လိုမြင်ကွင်းမျိုးကို အောကားတွေ ထဲမှာပဲ မြင်ဘူးတာ လေ .. မြင်ကွင်းက ဗျာ ..စော်ကြီးက အောက်မှာ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး .ဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့ ပေါင်ကြီးနှလုံးကားပီးတော့သူယျောက်ကျားကြီးက အဲ့ပေါင်ကြီးကို ဖြဲ ပီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို အားရပါးရ ယက်နေတယ်ဗျာ. လက်တဖက်ကလဲ လီးကို ကိုင်ပီး ဂွင်းထုနေတယ် .ကျတော် လဲ ဘာပြောကောင်းမလဲ သတွေးတွေ မျိုချပီး အသံမကြားရအောင် ဆက်ချောင်းနေတာ..ခန နေတော့ သူယျောက်ကျား က ဒူးထောက်ထိုင်ပီး လိုးပါလေရောဗျာ ..ပါးတင်းပေါက်ကို လုံးဝ ထမပိတ်ဘူး .အသားကုန်လိုးနေကျတာ .စော်ကြီးကပက်လက် သူယျောပ်ကျားက အပေါ်ကနေဆောင့်ဆောင့်ပီးတော့ကို လိုးနေတာ . ခန နေတော့ စော်ကြီးက ဖင်ကုန်းပေးတယ် .. ဟိုဘဲက နောက်ကနေ ခါးကိုင်ပီးအသာကုန်လိုး တာ.တအောင်လိုးလဲ ပီးရော ဘဲက လိုးတာ မြန်လာတယ် .စော်ကြီးကလဲ ကော့နေတာပဲ ပေးတာ.. ပီးလဲ ပီးရော သူယျောက်ကျားက စော်ကြီးကျောကုန်းပေါ်မှောက်ပီး အမောဖြေနေတယ် ပီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ ..
အဲ့ဒါနဲ့ ကျတော်လဲ အသာလေးပြန် ဆင်းပီး မနေနိုင်တော့လို့ ခုတင်ဘေးမှာ ထိုင်ပီး ဂွင်းကိုအားရပါးရ ထုပြစ်လိုက်တယ်.အဲ့လိုနဲ့ နောက် သုံးလေးနှစ်လောက်မှာ သူယျောက်ကျားက နောက်အိမ်ထောင်ယူသွားတယ် ဆိုပါတော့ စော်ကြီးက ဟက်ကော့ကြီးကျန်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ .စော်ကြီးက နဂိုထဲက နှာကလဲ ကြီး ဆို့တေ့ာ လီးဆာနေတာပေါ့ . မိုးရွာတရက်ပေါ့ဗျာ.မိုးရေထွက်ချိုး.တာပေါ့ ဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့ .. သူကလဲ သူအိမ်ရှေ့မှာ ရေတွေထဖြည့်နေတယ် စဥ့်အိုးတွေထဲ.အဲ့မှာသူကို ဝိုင်းဖြည့်ပေးလိုက်တယ်ရေတွေ .အဲ့မှာသူကြည့်နေတာ ကျတော်ဘောင်းဘီအောက်ထဲ က ကျတော်လီးကို ကိုကလဲ အတွင်းခံမဝတ်ရေချိုးတာဆိုတေ့ာ.ရေကလဲ ဆိုနဲ့ လီးက အမြောင်းလိုက် ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ ဒါနဲ့ရေတွေဖြညိ့နေတုန်း သူကြည့်နေတာ ကျတော့်လီးကိုကိုက ကြည့်နေတာသူကို သူကပြန်လဲ ကြည့်လိုက်တော့ နှယောက်လုံးရှက်သွားတာပေါ့.
ကိုကလဲ ရေစိုနေတဲ့ သူ ထမိန်အောက်က သူဖင်လုံးကြီးတွေကိုကြည့်နေတော့ လကတောင်လာပါလေရောဗျာသူကပဲ စကားစတာပါ.. “အမလေးကြောက်စရာကြီး” တဲ့. “ဘာလဲ ” လိုဆိုတော့ “ဘာမှဟုတ်ဘူး” တဲ့ အဲ့လိုနဲ့အဲ့တရက်ပီးတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ. .နောက်တပတ်လောက်ကြာတော့ အဲ့လိုပဲ မိုးလေးက ဖျောက်တောက်တောက် အိမ်မှာ အောကားခိုးကြည့်နေတုန်း ရုတ်တရက် သူရောက်လာမှန်းမသိလိုက်ဘူး. သူကနောက်ကနေ ချောင်းသံပေးမှလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ပါးကန်လေးကိုင်လို့.ကျတော်ကို ကြည့်နေတယ် ကိုကလဲ အောကားကြည့်နေတော့ ရုတ်တရက် ထမရ ဘူး ..လီးကြီးက ပုဆိုးကြားက ရုန်းထွက်နေတာလေ …
အဲ့ဒါနဲ့ မဝံမရဲကုန်းထရတာပေါ့.. အဲ့မှာသူက “အမလေးထပါဟာ.. ငါအားလုံးမြငိပီးပါပီ ငါအိမ်မှာ လက်ဖက်သုတ် လို့လာပေးတာ” တဲ့ “ဟုတ်ဟုတ်မကြီး” ဆိုပီး အောကားကြီးကလဲ မေ့ပီးမပိတ်မိဘူး ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ပီးမှ ပိတ်မယ်လုပ်တော့ “ဟဲ့ဟဲ့မပိတ်နဲ့တဲ့ ငါလဲကြည့်ချင်လို့” တဲ့.ဆိုပီးအိမ်ပေါ်တက်လာတယ် အတင်း “မကြီးမကောင်းဘူးလေ” လိုပြောတော့ “ဘယ်သူမှမရှိဘူး နင်လဲ ထိုင်ကြည့်” တဲ့.. ကဲပြောမရလေကြိုက်လေပေါ့ကိုကလဲအောကားထဲမှာလဲ အဖြူကောင်နဲ့ အဖြူမနှယောက်ကလဲ လိုးနေလိုက်ကျတာ..မီးပွင့်ထွက်မလား အောက်မေ့ရတယ်. .အောကားနှယောက်သားထိုင်ကြည့်နေရင်းပဲ.သူကစပြောတယ်.. “နင့်လိးအဲ့လောက်ကြိးလား” တဲ့ “အဲ့လောက်တော့ ဘယ်ကြီးမလဲဗျာ..ဒါပေမဲ့ မသေးဘူး” လို့ပြောလိုက်တော့. “ပြစမ်းတဲ့ငါ့ကို” ဆိုပီးပုဆိုးထဲအတင်းလက်နဲ့နှိုက်ကြည့်တယ် လီးကြီးကိုလဲ ကိုင်မိသွားရော.. “ဟာနင်လီးကြီးက အကြီးကြီးပါလား” တဲ့ “အင်းလေ မသေးဘူးလို့ပြောသားပဲ .” “ငါဂွင်းထုပေးမယ်နော် ” ဆိုပီးလီးကိုဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ်ဗျာ.
ကျတော်လဲ အသာလေးခြေထောက်ဆင်းပေးထားလိုက်တယ်.နောက်တော့ သူအားမရဘူးနဲ့တူတယ်..ကျတော့်ပုဆိုးကို ဂွင်းလုံးချွတ်ပီး ထောင်မတ်နေတဲ့ ကျတော့်လီးကြီးကို သူလက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပီးဂွင်းထုပေးနေတယ်လီးထိပ်က ဒစ်ကြီးက တဖြေးဖြေး ကြီးလာပီးရဲတွတ်လာတယ်. “မောင်လေးရယ် နင့်လီးကြီးက လက်ရောင်လိုက်ပီးကြီးကြီးလာပါလား..” ဟုတ်တယ် ကျတေ်ာက “ကိုင်လေကြီးလေပဲ .” “နင်ဘာတွေလုပ်ထားသေးလဲ နင့်လီးကို.” “ဘာမှမလုပ်ဘူး သဘာဝပဲ ဂွင်းထုတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်.” .ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုသူဂွင်းထုပီးစကားလေးပြောနေတုန်း သူဖင်ကြီးတွေကို ကျတော် ပွတ်ပီးဆုပ်နယ်ပေးနေလိုက်တယ်သူတဖြေးဖြေးဖီးတက်လာပီး ကျတော့်လီးကြီး ကိုကုန်းစုပ်တော့တာပဲဗျာ “အား..ဟား..ပြွတ်..ပြွတ် အားကောင်းလိုက်တာမကြီးရာကျတော်လိုးချင်နေပီအရမ်း..” “လိုးလေ မောင်လေးရဲ့ မကြီးလဲမောင်လေးလိုးတာ ခံချင်နေပီ..” လီးကိုလဲ ဗျာ စုပ်လိုက်တာတအားပဲ လီးပြတ်ပါသွားမလား အောက့်မေ့ရတယ်ဒစ်ထိပ်ကြီးကို ငုံပီးစုပ်လိုက်..လီးအရင်းထိစုပ်သွင်းလိုက်နဲ့ အတွေ့အကြုံရှိတော့ အရမ်းကောင်းတာပဲ ..ကျတော်လဲ ဘာမှပြောမနေတောဘူး ထမိန်တောင် မချွတ်တော့ပဲ သူစောက်ဖုတ်ကြီးကို ဖြဲ ပီးအားပါးတရ ယက်ပေးလိုက်တယ် ထွန့်ထွန့် ကိုလူးနေတာပဲ ဗျာကျတော့်ခေါင်းကို အတင်းကိုင်ပီး.ကော့ကော့ ပီး ကပ်ထားတယ်
“အားအား..မောင်လေးရေ အရမ်းကောင်းတယ် ယက်ပါ အသားကုန်” ကျတော်လဲ သူစောက်စိကို နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ဖိပီး စုပ်စုပ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာစောက်စိကြီးက တောင်ပီးပြူးနေတာပဲ..ပီးတော့ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကြီးကို လျှာကြီးနဲ့ထိုးကလော်ပေးလိုက်တယ် .သူစောက်မွှေးတွေ ကျွတ်ပီး ပါးစပ်ထဲတောင်ရောက်တယ်.. သူလဲ ကောင်းလွနိးလို စောက်ရည်တွေကိုရွှဲနေတာပဲ ညှိစို့စို့အရသာနဲ့ သူတချီပီးသွားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ. အဲ့ဒါနဲ့ “မမ ဖင်ကုန်းပေးနော် နောက်ကနေမောင်လေးလိုးမယ်..” “အေးအေး ..” သူဖင်ကုန်းလိုက်တယ်ကျတော်သူထမိန်ကို မချွတ်ပဲ အသာစွဲပီးလှန်တငိလိုက်တယ်..အားလားဖင်ကြီးကို ကော့ပီးကုန်းထားတာဗျာ ဖွေးနေတာပဲ စောက်ဖုတ်ကြီးကလဲ ပြူပီးနောက်မှာ ဖောင်းထွက်နတေယ်.မနေနိုင်တော့ဘူး သူဖင်ကြီးနှလုံးကိုကိုင်ဖြဲပီး..စောက်ဖုတ်နဲ့စအိုဝကြီးကို ကျတော်လျှာကြီးနဲ့အထက်အောက် လျှောတိုက်ပီး ယပ်ပေးလိုက်တယ်.
သူဖင်ကြီးနှလံုးကြား ကျတော့်ခေါင်းကို မြုပ်သွင်းထားလိုက်တယ် “အား.ဟားး.မောင်လေးရယ် လိုးပါတော့ဟာ.. ငါမရတော့ဘူး” “ဟုတ်မကြီးလိုးပီနော်.” ကျတော့်လီးကြီး အကြောပေါင်းတထောင်ထနေတာဖုထစ်နေတာပဲဗျာ..လက်နဲ့ ကိုင်ပီး သူစောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့ပီးထိုးသွင်းလိုက်တယ်ဗျာ.. “.ပြွတ်ဖွတ်.အား..အားကောင်းလိုက်တာဟာ လုိးလိုးမောင်လေး..မကြီးမနဘူား သိလား.” “ကောင်းလိုက်ာတ မကြီး စပတ်က ကြပ်နေတာပဲနော်..” “အေးပေါ့အလိုးမခံရတာကြာပီလေဟာ နင်ကလဲ.” ကျတော်လဲ သူခါးကို ကိုင်ပီး.အားရပါးရဆောင့်လိုးလိုက်တယ်ဗျာ .ဖြောင်းဖြောင်း..ပြွတ်..ဖွတ် “အား..ဟား..ရျီး..ကောင်းလိုက်တာ အား.ဟား” သူစောက်ဖုတ်ကြီးထဲ ကျတော့်လီး ဝင်သွားတာ ငုံကြည့်လိုက်တော့လီးမှာ သူစောက်ရည်တွေ ဖြူဖူ အဖတ်တွေ ကပ်ပါလာတယ်သိလားစောက်ထုတ်ကြီးကလဲ ပိုပိုခုံးလာတယ်.. ခနောလက်ဖင်ကုန်းလိုးပီးတေ့ာ သူကပြောတယ်. “နင်ပက်လက်လှန်တဲ့ ငါအပေါ်က တက်ဆောင့်မယ်” တဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ ပက်လက်လေးအသာလှန်ပေးပီး လီးကို ထောင်ပေးထားလိုက်တယ်
သူအပေါ်ကနေတက်ခွ ပီးလီးကို သူစောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ပီး တက်ဆောင့်တော့တယ်ဗျာ..ဆောင့်လိုက်တာဗျာ လီးကျိုးမတတ်ပဲ ကျတော်လဲ အရမ်းပီးချင်လာတယ်ပီးချငိပီလို့ပြောတော့ ငါ့စပတ်ထဲမှာပဲ ပီးတဲ့. အဲ့ဒါနဲ့ သူလီးကိုဆွဲချွတ်ပီး ဗိုက်ပေါ်တင်နေတဲ့ ကျတော်လီးကြီးကို ဂွင်းထုပီးစုပ်လိုက်သေးတယ်.ကောင်းလွနိးလို့ လရည်တွေ ပန်းမထွက်အောင် မနဲထိန်းပီး..သူကိူုပက်လက်လှန်ခိုင်းလိုက်တယ်ပီးတော့.သူပေါင်ကြီးနှလုံးကို ဖြဲ ပီး စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ ကို ထိုးသွင်း အချကိနှဆယ်လောက် ဆောင့်လိုးလိုက်တယ် .. .ပြွတ်.ပြွတ်.ပလပ်.ပလပ်.. “အားအားမမရေ ပီးတော့မယ်..အား ဟား..မောင်လေးလိုးလိုး.” ပြောပီးချိန်မှာပဲ.ကျတော့လရည်တွေ သူစောက်ဖုတ်ကြီးထဲပန်းထည့် လိုက်ပါတော့တယ် ဗျာ.ပြီးပါပြီး
One thought on “တခုလပ်​မမ”
I’m not sure if I’m going to be able to do that, but I’m not sure if I’m going to be able to do that.Make an appointment